अष्ट्रेलिया पढ्न गएका नेपाली युवती यौन ब्यवसायमा - Like Page np
तराईको हुरी प्रभावित क्षेत्रमा रवी लामिछाने पुग्दा पिडितले यसरि आशु झारे, रवीको स्थलगत भिडियो रिपोर्ट सहित
मुटु दरो गरेर हेर्नुहोस : २ मिनेटमै गाउँनै शुन्य भयो, एकै परिवारको ५ जनाको मुत्यु
तीनवटा पहाड फोडेर ३६ वर्ष लगाएर गाउँमा पानी ल्याउने यी व्यक्ति..
श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर दर्सन गर्नुहोस तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ । #जय_श्रीकेदारनाथ।।
गर्भ नबसेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो छन १ महिनामै गर्भधारण गर्ने घरेलु औसधि
सालको पात, लालुमै र केसरीमा अहिलेसम्मकै खतरा डान्स, चर्चित लोक मोडल टिका जैसीको बब्बाल डान्स (भिडियो)
आज सोमबार राम जानकि मन्दिरलाई एक-एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।
अचम्म को यो दुनियाँमा जे पनि हुन्छ? हेर्नुस त दिउसै ठमेलमा के भयो?
खुसिकाे खबर ! रेखा थापाले राेकेरै छाेड्ने भइन एर्पाेटकाे ज्यादती: सेयर गराै
परि तामाङको फेरी बाहिरियो गोप्य भिडियो !
Home/अन्तर्राष्ट्रिय/अष्ट्रेलिया पढ्न गएका नेपाली युवती यौन ब्यवसायमा
अष्ट्रेलिया पढ्न गएका नेपाली युवती यौन ब्यवसायमा
0 3,2002minutes read
वर्ष २४ की सकुन्तला (नाम परिवर्तन) अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छिन् । खर्च जोहोका लागि क्लिनिङ र मसाज सेन्टरमा काम गर्छिन् । त्यसबाहेक उनको ठूलो आम्दानीको स्रोत भने इन्टरनेटमार्फत बोलाएका घरमा गएर ‘सेक्स’को सेवा दिनु हो । न्यु साउथ वेल्स राज्यको आटअमनमा रहेको क्लिनिङ र पारामाटामा रहेको मसाज सेन्टरहरूमा नियमित आम्दानीका लागि काम गर्ने धेरै युवतीमध्ये उनी पनि हुन् । उनले इन्टरनेटमा आफूलाई कलगर्लका रूपमा स्थापित गराइन् ।
इन्टरनेटमा ‘फिस’ तिरेपछि उनी सेवा दिनका लागि बोलाएका ठाउँमा पुग्छिन् । यस्तो कामका लागि अष्ट्रेलिया सरकारले कुनै रोक नलगाएका कारण यहाँको बसाई, पढाई र आम्दानीका लागि यौनलाई पनि पेसा बनाएको उनले बताइन् । इमान्दारीताका साथ बोलाएका ठाउँमा पुग्ने उनी दिनमा धेरैजनालाई सेवा दिनुपर्ने सुनाउँछिन् । उनले भनिन्,‘यसरी बोलाउने ठाउँमा गएर सेवा दिने गरेकी छु । त्यसले आफ्नो राम्रो खर्च चल्छ ।’ उनले घन्टाको एक सय ५० डलर सेवाशुल्क लिने गरेकी छन् । इन्टरनेटमार्फत नै भनेको खातामा उक्त रकम जम्मा गरेपछि युवती सेवा दिन पुग्छन् ।
उनका अनुसार आफुले काम गर्ने ठाउँमा कम्तिमा ६ देखि ७ जना यस्तो सेवा दिने नेपाली विद्यार्थी युवती रहेका छन् । ‘हामीलाई अरू कुराको समस्या छैन रकम लिएपछि सेवा दिन्छौं ।’, उनले भनिन्,‘आम्दानीका लागि यो काम गरेका हौं ।’ करिब एक लाख नेपाली रहेको अष्ट्रेलियामा कम्तिमा ५ सय यस्ता युवती रहेको अनुमान गरिएको छ । सिड्नी सहरमा मात्रै कम्तिमा डेढ देखि २ सय सम्म नेपाली युवतीले पढाई र अन्य सुविधाको रूपमा कलगर्लका रूपमा काम गरिरहेको हुनसक्ने सकुन्तलाको बयानको आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाली युवतीका लागि नेपाली, भारतीय र इन्डोनेशियन, अष्ट्रेलियन लगायतका ग्राहक हुने गरेका छन् । समयअनुसारको सेवा दिने गरेको उनले सुनाइन् । उनीहरू रकम लिएपछि इमान्दारीताका साथ विलम्ब नगरी सेवा दिन्छन् । ‘हामी व्यस्त हुन्छौं, समय कम हुन्छ । अन्यत्र पनि जानुपर्ने हुन्छ । नियमित काममा पनि जानुपर्छ । त्यसकारण ढिलो नगरी सेवा लिनुहोस् ।’, उनी भन्छिन्,‘होइन भने अन्यत्र जानुपर्छ ।’ उनीहरूलाई यो पेशा अपनाएकोमा पश्चाताप समेत नरहेको सकुन्तला बताउँछिन् । ‘जानेर बुझेर नै यो पेशा अपनाएकी हुँ । खर्चका लागि पैसा चाहिने र पेशामा कुनै अवरोध नभएका कारणले अपनाउन किन अप्ठ्यारो मान्नु ?’, उनी भन्छिन् । यो पेशामा राम्रो आम्दानी भएकै कारणले उनले इन्टरनेटमा आफ्नो सम्पर्क पनि छाडेकी हुन् । उनीजस्तै धेरै युवतीले इन्टरनेटमा यसरी सम्पर्कका लागि खाता खोलेका छन् ।
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली युवतीले प्रायः ‘लोकान्टो’मा खाता खोलेका हुन्छन् । सकुन्तला सिड्नी वरिपरि छरिएर रहेका नेपाली मध्येकी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यसबाहेक राजधानी क्यानबेरा, मेलबर्न, ब्रिसबेनलगायतका ठाउँमा रहेका नेपाली युवतीले पनि यसरी सेवा दिनका लागि यौनलाई पेशा बनाउने गरेका छन् । उनीहरू प्रति घन्टाका दरले सेवाग्राहीसँग शुल्क लिने गर्छन् । यौन पेशा भने उनीहरूको प्रमूख पेशाचाहीँ होइन । अन्य कामलाई प्रमुख पेशा बनाएर अतिरिक्त तर बलियो आम्दानीका लागि यो पेशामा संलग्न हुँदै आएका छन् । नेपाली समुदायको जनसंख्या थपिँदै गएपछि कलगर्लका रूपमा नेपाली युवतीको संख्या पनि बढिरहेको अनुमान गरिएको छ ।-नंया बाटोबाटवर्ष २४ की सकुन्तला (नाम परिवर्तन) अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छिन् । खर्च जोहोका लागि क्लिनिङ र मसाज सेन्टरमा काम गर्छिन् । त्यसबाहेक उनको ठूलो आम्दानीको स्रोत भने इन्टरनेटमार्फत बोलाएका घरमा गएर ‘सेक्स’को सेवा दिनु हो । न्यु साउथ वेल्स राज्यको आटअमनमा रहेको क्लिनिङ र पारामाटामा रहेको मसाज सेन्टरहरूमा नियमित आम्दानीका लागि काम गर्ने धेरै युवतीमध्ये उनी पनि हुन् । उनले इन्टरनेटमा आफूलाई कलगर्लका रूपमा स्थापित गराइन् ।
उनका अनुसार आफुले काम गर्ने ठाउँमा कम्तिमा ६ देखि ७ जना यस्तो सेवा दिने नेपाली विद्यार्थी युवती रहेका छन् । ‘हामीलाई अरू कुराको समस्या छैन रकम लिएपछि सेवा दिन्छौं ।’, उनले भनिन्,‘आम्दानीका लागि यो काम गरेका हौं ।
मेरो नाट्किय ढङले बलात्कार भयो, लजमा प्रेमी सङगै सुतेको उठ्दा त प्रेमिको साथी सुतेको थियो म सँग [भिडियो]
पाँच वर्ष कुवेतमा कमाएको पैसा सहित श्रीमानले अर्की लिएर भागेपछि श्रीमतीको बिजोग (भिडियो हेर्नुहोस)
दशगजामा भारतीयलाई नेपाल प्रहरीले यसरी धपायोे ! सिमा क्षेत्रबाट यसरी भागे भारतीय ! (भिडियो सहित)
रक्सीको तालमा धनी बाउकि छोरिको बीच सडकमा यस्तो तमासा :: पुरा हेर्नुस तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस (भिडियो सहित)